ရေစင်: April 2008
".. သား.. မင်းတကယ်ကြိုးစားရဲ့လား..
.. ဟုတ်ကဲ့.. အမေ..
.. တကယ်.. သေသေချာချာကြိုးစားတာအမှန်နော်...
.. ဒါဆို မပူနဲ့သား.. မင်းတကယ်ကြိုးစားနေတာမှန်ရင် မအောင်မြင်စရာမရှိဘူး...
..အောင်မြင်လိမ့်မယ်.. မကြိုးစားတော့ဘူးဆိုမှသာ တကယ်ရှုံးသွားတာ.."
လူမည်းဆင်းရဲသားလေးဘ၀ကနေ အမေရိကန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလောကရဲ့ ထိပ်သီးပုဂိုလ်တဦးဘ၀ကို ရောက်ခဲ့တဲ့ ဂျွန်ဟာရိုးလ်ဂျွန်ဆင်ကို စွမ်းအားဖြစ်စေခဲ့တဲ့ စကားလေးပါဘဲ...
တကယ်တော့...ဒီစကားလေးဟာ သူ့တယောက်အတွက်တင်မက.. လူတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်စေတဲ့ စကားလေးပါဘဲ...
အခုလက်ရှိ.. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေ.. လူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာလဲ.. ဒီအတိုင်းပါဘဲ.. လူတွေပြောနေကြတာ.. ဖြစ်နိုင်ရုံတင်မကဘူး.. မှန်နေတာက... အခုငါတို့ မဲသွားထည့်ရင်.. ငါတို့မဲထည့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး... ဒီစစ်အစိုးရက မဲလိမ်မှာဘဲတဲ့...
အဲဒါဘယ်သူမှမခန့်မှန်းမိဘူးလား... အားလုံးခန့်မှန်းမိရုံတင်မကဘူး... ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို သိနေတာဘဲ.... ဒါပေမဲ့...ကျမအမြင်ကတော့ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်.. ကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့... တကယ်တမ်းလွတ်မြောက်ချင်တယ်.. လွတ်လပ်ချင်တယ်ဆိုရင် နည်းလမ်းကို အမြဲတမ်းရှာပြီးတော့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးနေရမှာဘဲ...
..ဖိနှိပ်မှုတွေအရမ်းများတဲ့... လွတ်လပ်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ အောက်မှာနေရပြီး.. လွတ်လမ်းကိုရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့... သူတို့အခွင့်အရေးပေးရင်ပေးသလောက်ယူပြီး... ကျမတို့ရဲ့ တကယ့်ဆန္ဒအမှန်ကို ဖော်ထုတ်ကြရမှာဘဲ...
ငါထည့်ရင်လည်းမဲလိမ်မှာဘဲ... သွားလည်းမထည့်ဘူး... ၀င်လည်းမပါဘူး...ဆိုရင်တော့... နိုင်ငံအပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့အတွက် .. တကယ်ကြိုးစားခဲ့ရဲ့လားလို့မေးမဲ့သူရှိရင် တကယ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်လို့... ပြောလို့မကောင်းတဲ့အဖြေမျိုးလို့.. ကျမကတော့ ယုံကြည်တယ်...
တချိန်..နောင်လာနောက်သားတွေကမေးလို့.. အဲဒီလို စနစ်ဆိုးရဲ့အောက်မှာနေရတုန်းက... အစ်ကို၊အဖေ၊အမေ၊အမ တို့က ဘယ်လိုပါဝင်ခဲ့ကြလဲမေးခဲ့ရင်... အားပါးတရနဲ့ အမေတို့ကတော့ မဲသွားမထည့်ဖူးလို့ဖြေရင်တော့.. မရဘူးလားဆိုရင်တော့.. ရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့.. အခက်အခဲတွေကြားထဲက အမေ၊အဖေတို့ကတော့ဖြင့် ဘယ်လို ဆန္ဒမဲတွေ ပေးခဲ့ကြတာဆိုရင်တော့... ပိုပြီးဆန်းသစ်တဲ့ နောင်လာနောက်သားတွေ..အားကျအတုယူဖွယ် ပုံပြင်လေးတခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျမ အသေအချာကို ယုံကြည်ပါတယ်...
တကယ်တမ်းက.. ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်လာဘူး.. နည်းနည်းလုပ်ရင် လုပ်သလောက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ကြရင်... အလှမ်းမဝေးတဲ့ မဲရုံဆီသွား.. ကိုယ့်မဲတပြားနဲ့ စစ်အစိုးရဆီမှာ..ငါတို့လွတ်လပ်ရေးတွေ ပြန်ယူကြဖို့...
".. သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. မင်းတို့တကယ်ကြိုးစားကြရဲ့လား..." လို့ ကျမမေးလိုက်မယ်..။
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 4:55 PM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 3:57 PM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 3:49 PM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 3:17 PM0comments
ဟေ့... ငါ့ရဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး...
စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ လိုက်ရေးထားတဲ့စာကို ကဗျာလေးများဖြစ်မလားလို့...
ညီမဖြစ်သူကို ၀မ်းသာအားရနဲ့ ပေးဖတ်လိုက်ကာမှ....
စိတ်ထဲမှာ အွန့်ခနဲနေအောင် အောင့်သွားတာဘဲ...
ကဗျာပါလို့ပြောပြီး ပေးဖတ်တာတောင်.. ဘာကြီးလဲဆိုတော့...
အဲဒီလို အောင့်နေရာကနေ.. မျက်ရည်ပါထွက်ချင်အောင် လုပ်လိုက်တာက အငယ်ဆုံးညီမ...
ပေးဖတ်တဲ့စာကို အသံနေအသံထားနဲ့ ဆိုနေလိုက်တာများ ရှေးခေတ်က အလင်္ကာဖတ်ပြနေတဲ့အတိုင်းဘဲ... ကုန်းကုန်းဖတ်ပြီးတော့ ရယ်နေကြတဲ့ ညီမနှစ်ယောက်လုံးကို စိတ်ကူးထဲမှာ ရယ်ချင်ဦးဆိုပြီး ခေါင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့ ထုလိုက်ချင်တယ်....
စဉ်းစားကြည့်လေ.. ကိုယ်က ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ရေးထားတဲ့စာကို သူတို့က၀ိုင်းဟားနေတယ်ဆိုတော့...
အေးပေါ့လေ.. မရေးတတ်ဘူးဆိုတော့လည်း ဟားထားကြဦးပေါ့... နောက်ဆိုရင် သူတို့ကိုလုံးဝမပေးဖတ်တော့ဘူး...
ညီမလေးက အ၀တ်ဝတ်ရင် ဗရုတ်သုတ်ခလေးတွေနဲ့ အရမ်းလှတယ်... အဲဒီတော့ ကျမလည်း အဲဒါတွေဝတ်ရင် လှမှာဘဲဆိုပြီး အပီအပြင်ဘဲ ၀တ်လိုက်တယ်... ပြီးတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကို...
ဟေ့.. ဒီမှာကြည့် ငါလှလား...
အင်း.. လို့ ခေါင်းညိတ်အပြီးမှာတော့ သူတို့တယောက်တပေါက် ပြန်ဖြေသံတွေကြားမှာ... ကျမ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ဖင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်ပြီးသေလိုက်ချင်တယ်....
ဟင်... နင်နဲ့မလိုက်ပါဘူး.. ၀တုတ်မကြီးလိုဘဲ...လို့ပြောသူကပြော
ဟားဟားဟား... ကြည့်ပါဦး သူ့ကို.. ၀က်ဝံကြီးနဲ့တူလိုက်တာ.. လို့ အမည်နာမ တပ်တဲ့လူကတပ်...
အေးလေ.. ဟုတ်တာဘဲ.. အဲဒါကြီးမ၀တ်ပါနဲ့... နေ့စေ့လစေ့ကိုယ်ဝန်သည်ကြီးနဲ့တူတယ်... လို့ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် အကြံပေးတဲ့လူကပေးနဲ့...
ဒါပေမဲ့.. ကျမကလည်း အရိုးကျေကျေ.. အရေခန်းခန်း လုံးဝကို မလျော့ဘဲ...
ဟာ.. ဟ.. ငါသိပါတယ်.. ငါနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုတာ..ဒါပေမဲ့ ငါကြိုက်တယ်.. ၀တ်မှာဘဲ..
စိတ်ထဲမှာတော့ ချက်ခြင်း ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေကို ပြေးချွတ်လိုက်ချင်တယ်... ဟန်မပျက်သာပြောခဲ့ရပေမဲ့.. နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီအ၀တ်အစားကို ထပ်မ၀တ်ဖြစ်တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသိဆုံးဘဲ...
သူများရဲ့ ဝေဖန်အကြံပေးမှုကို လိုချင်တဲ့ကျမ.. တကယ်တမ်းပေးလာတော့လည်း မကျေမနပ်နဲ့ ပေးတဲ့လူကိုဘဲ ကြိတ်ပြီး စိတ်ဆိုးကျန်ခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး...
လူတိုင်းက အဝေဖန်ခံနိုင်တယ်လို့ ပြောချင်ပြောကြမယ်.. တကယ်တမ်း ဝေဖန်ခံနိုင်တယ် မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ တချို့က အပြင်ကလူတောင် အကဲခတ်လို့ရတယ်.. တချို့လူတွေကျတော့လည်း အပြင်လူအကဲခတ်လို့မရဘူး...
ကြည့်လိုက်ရင်တော့.. ဒီလူအတော်ကို ဝေဖန်ခံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့... ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ ကိုယ်စီသိနေကြမှာပါ.. အဲဒါက ငါဟာ အဝေဖန်ခံနိုင်လား.. မခံနိုင်ဘူးလားဆိုတာဘဲ...
အဲဒါတောင်လှည့်ပြောလိုက်သေးတာက... နင်တို့ကပေးဝေဖန်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ကိုဘဲပြောတယ်...အကောင်းလေးလည်း..နည်းနည်းပြောပါဦး...
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 1:50 PM0comments
နင်ငါ့ကို လုံးဝကို မချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လား....
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 12:57 PM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 3:46 PM 1 comments
ရူးသွပ်မှုတခုနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လို့ပြောနေသံတွေကို လေညှင်း ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ချစ်သူကို တမ်းတမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာ ချစ်တတ်တဲ့သူတိုင်း ခံစားဖူးတဲ့ အရာဆိုတာကို သိနေတာဘဲ။ ပြောတဲ့လူတွေထဲကလည်း လေညှင်းလို ခံစားရတဲ့လူ မရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တာမှမဟုတ်တာ….
ညီညီရယ်…. ညီညီဆိုရင်ရော လေညှင်းကို အဲလိုဘဲပြောမှာလား…. လေညှင်းသိပါတယ်.. ညီညီကတော့ နင်နဲ့ငါနဲ့အရင်လိုဘဲ ပြန်နေကြရအောင်ဆိုတဲ့ စကားတွေကလွဲရင် လေညှင်းခံစားနေရတာတွေ အားလုံးကို လျှစ်လျှူရှုထားနိုင်တဲ့သူဘဲ…
ထားခဲ့တဲ့သူက မေ့နိုင်ပေမဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ လေညှင်းရဲ့ အပြစ်တွေပါဘဲ….
အားလုံးကို မေ့ပြစ်နိုင်ပြီလို့လေညှင်းဘယ်လောက်ဘဲ ကြွေးကြော် ကြွေးကြော် အချိန်တွေကြာလာပေမဲ့ သူက လေညှင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ရှိနေဆဲဆိုတာ သိနေတဲ့အတွက် ငါးပါးသီလထဲက အနည်းဆုံး သီလတပါးကိုတော့ လေညှင်း အမြဲချိုးဖောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ… ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘဲသိနေတယ်…..
အတူကျော်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပျော်စရာအချိန်တွေကို ပြန်တွေးရင်း ရူးနေခဲ့တာ အချိန်တွေတော်တော်လေးတောင် ကြာနေခဲ့ပြီ….
.. လေညှင်း… နင်အခုချိန်ထိ ညီညီ့ကို မျှော်လင့်နေတုန်းဘဲလား…
သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အမေးအတွက် လေညှင်းရဲ့ အဖြေက …. ငါသူ့ ကိုချစ်နေတုန်းဘဲ… ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအချစ်က သူပြန်အလာကို မျှော်လင့်နေတဲ့ အချစ်မဟုတ်ဘူး… ငါသူ့ ကိုမမျှော်လင့်နေခဲ့ဘူး....
ဒီအချိန်မှာ လေညှင်းက အရင်လို ဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်တော့ဘူးလေ…
…. လေ.. လေညှင်းမဟုတ်လား…
အသံကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ နည်းနည်းလေး အံ့သြတာကလွဲရင် လေညှင်း မတုန်လှုပ်၊ စိတ်မလှုပ်ရှားတော့ပါဘူး….
..အော်.. ညီညီပါလား… နေကောင်းတယ်နော်… နင်ဒီမှာဘာလာလုပ်တာလဲ…
.. အလုပ်နဲ့ ဆိုပါတော့… နင်ရော အခုဘာတွေလုပ်နေလဲ…
…. ငါလား လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာ… နင်နဲ့ တောင် မတွေ့ တာကြာပြီနော်… အလုပ်အဆင်ပြေရဲ့လား…
… ဒီလိုပါဘဲဟာ… နင်ကတော့ အရင်အတိုင်းဘဲနော်.. ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး..
.. နင်လည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ ညီညီရယ်…
ဒီလိုနဲ့သူနဲ့ပြန်တွေ့ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့….. ။
သူ့ ဘက်က လေညှင်းကို စိတ်ဝင်စားမှုတွေ ပြန်ပြီးတော့ ပြလာတယ်… တကယ်ပါ လေညှင်းသူ့ကို မမျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်း သူ့ ဆီက ပြန်ပြီးတော့ ကမ်းလှမ်းလာတော့ သူ့ အတွက် အဖြေ လေညှင်းဆီမှာ အဆင်သင့်မရှိနေဘူး….
… လေညှင်းရယ်… တချိန်တုန်းက နင့်ကိုငါ နာကျင်စေခဲ့တာကို တောင်းပန်ပါတယ်.. တကယ်ဆိုရင် နင်ဟာ ငါ့အတွက် အလိုအပ်ဆုံးဆိုတာ အခုချိန်မှာ ငါပိုသိလာတယ်… ငါ့ကို ပြန်လက်ခံပေးပါ… နင့်ကိုငါ နောက်ထပ် မနာကျင်စေရပါဘူး… ငါကတိပေးပါတယ်…
သူပေးခဲ့တဲ့ ကတိတွေက ကျေနပ်စရာပါ… ချစ်သူဆီက အခုလို မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်လာတော့ ပျော်ရွှင်ရမှာပေါ့….
… ညီညီ.. နင့်ရဲ့ စကားလုံးတွေက ငါ့အတွက် ကျေနပ်စရာပါ… နင်ပြောတဲ့ စကားတွေကိုလည်း ငါယုံကြည်ပါတယ်… ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ နင့်မျက်ဝန်းမှာ လေးနက်မှုတွေ ငါမြင်နေရလို့ ဘဲ…
… နင်ဘယ်တော့မှ ငါ့ဆီပြန်လာမယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အတွက် နင်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ငါအံ့သြမိတယ်… ငါလေ နင့်ကို တချိန်က သိပ်ချစ်ခဲ့တယ်… နင်နဲ့ လမ်းခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်း ငါ အရမ်းခံစားခဲ့ရတာကို နင်သိရင်လည်းသိမှာပေါ့… အခု နင်ငါ့ဆီကို လေးနက်မှုတွေနဲ့ပြန်လာတဲ့အတွက် ငါတကယ်ဝမ်းသာမိတယ်….
..... ဒါပေမဲ့ ငါနင့်ကို လက်မခံနိုင်တော့ဘူး… ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ငါ့နှလုံးသားက သေသွားခဲ့တာ နင်နဲ့ လမ်းခွဲပြီးတဲ့ အချိန်တည်းကဘဲ… နောက်ပြီး နင့်ကိုချစ်တဲ့ အချစ်လည်းဘဲ… ငါ့နှလုံးသားနဲ့ အတူ သေသွားခဲ့ပြီလေ…
ညီညီ… အဲဒီတုန်းက နင့်ကို ချစ်ခဲ့တဲ့အချစ်က တကြိမ်တခါတည်းဘဲ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အချစ်မျိုးပါ… အခုချိန်မှာ အဲလိုအချစ်မျိုးကို ငါ့နှလုံးသားက နင့်အတွက် မပေးနိုင်တော့ဘူး….
…. အဲဒါကြောင့် နင့်အတွက် အချစ် ငါ့မှာမရှိတော့ဘူး.. နောက်တခုက ငါ့နှလုံးသားကို အဆိပ်သင့်စေခဲ့တဲ့ အရာတခုကို ငါဘယ်တော့မှ ထပ်ပြီးတော့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး…
.. ဒီမှာ ညီညီ… ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်း တခါတည်းဘဲရတယ်.. နင်ငါ့ကို သေချာသင်ပေးလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာတခုက လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထက် ပိုပြီးတော့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ပိုမချစ်ဘူး….
နောက်ပြီး.. နင့်ကိုချစ်မိလို့နွမ်းနယ်နေတဲ့ ငါ့နှလုံးသားကို ငါအရမ်းသနားမိတယ်… နောက်တခါ သူ့ ကိုထပ်ပြီးတော့ ခံစားရအောင် ငါမလုပ်တော့ဘူး… ဒါတွေအားလုံးက.. နင်ငါ့ကို သင်ပေးခဲ့တာချည်းပါဘဲ.. ဒီလိုပြောရတဲ့အတွက် ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး… နင်နဲ့ ငါနဲ့အမြဲတမ်း သူငယ်ချင်းတွေပါဘဲ…
ဒီတခါလည်း.. သူနဲ့လေညှင်း လမ်းခွဲခဲ့ရပြန်ပါပြီ… ဒါပေမဲ့ အရင်တုန်းကလို လေညှင်း မငိုတော့ပါဘူး.. မခံစားရတော့ပါဘူး… လေညှင်း သူ့ ကိုချစ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အချစ်မှာ ရယူပိုင်ဆိုင်လိုမှုမရှိတဲ့ အချစ်မျိုးလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်ဆိုရင် လေညှင်းကို နားလည်နိုင်ကြမှာပါ…..
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 1:40 PM0comments
ရင်ထဲက ၀မ်းနည်းမှုတွေအတွက် မျက်ရည်တွေက မျက်ဝန်းထဲမှာ နေရာယူပြီး ပါးပြင်ပေါ်လိမ့်ကျဖို့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်…..
အော်.. ရက်စက်လိုက်တာအချစ်ရယ်… ဘာမှန်းမသိရဘဲ စွန့်ခွာခံရသူအဖို့တော့..
တောက်… စူးခနဲ့ဖြစ်သွားတာကြောင့် ကျလုလုမျက်ရည်ကို ပြန်သွင်း… ကြည့်လိုက်တော့..
မင်းတော်တော်အနှောင့်အယှက်ပေးပါလား.. ငါ သတ်လိုက်ရသေတော့မယ်။
ပြောသာပြောတာ လက်ကတော့ ကိုက်နေတဲ့ခြင်ကို ဖောင်းခနဲ မြည်အောင် ရိုက်သတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။
အားရပါးရ ကုတ်အပြီးမှဘဲ… ဟင်း..အခုမှဘဲ နေသာထိုင်သာရှိသွားတော့တယ်။
… စောစောက ငါခံစားနေတာဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်…
မထွက်တော့တဲ့ မျက်ရည်ကို အတင်းပြန်ညှစ်ထုတ်… ဘာလဲ.. အော်.. ကိုယ်ဘာအမှားများလုပ်မိလို့လဲ… နည်းနည်းလေးတော့ အကြောင်းပြချက်လေးမင်းပေးခဲ့သင့်တယ်။
ဟော… မျက်ရည်နည်းနည်းထွက်ချင်လာပြီ… တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခိုလာတဲ့မျက်ရည်…
နင်ကငါ့ကိုရိုက်တယ်.. ဟုတ်လား… ငါ့မိဘတောင် ငါ့ကို မရိုက်ဘူး…. ၀ုန်း.. ဒုန်း..
အာ…. အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက လင်မယား ကျီစယ်နေကြတာ… ဒါပေမဲ့ ဒီကျီစယ်ပုံကြီးကတော့ မမိုက်ပါဘူး….
ရှိစေတော့… သူများပြသနာကိုအသာထား.. ကိုယ့်ဖီလင်ကိုယ်ပြန်သွင်းဦးမှ…
ရင်ထဲမှာ.. နာတယ်.. စိတ်မကောင်းဘူး..
ဘာ…. နင်ကများငါ့ကို့ ပြန်အော်တယ်… ငါတီးလိုက်လို့.. ထပ်နာဦးမယ်..
အောင်မာ.. ရှင်ကများ.. စောစောက အငိုက်မိသွားလို့ခံလိုက်ရတာ.. အခုလာရိုက်လို့ကတော့ နဖာချီးပါ ဖင်ထိုင်လျက်လဲသွားမယ်.. လာခဲ့…
အောင်မယ်.. ငါထပ်လုပ်ရ နှပ်ချီးပါ အော်ပဒါလိုက်သွားမယ်.. ဒုန်း.. ခွမ်း..
အောင်မလေး… အရပ်ကတို့ရေ.. ကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လား.. သူက ကျုပ်ကို ထပ်ရိုက်ချင်သေးသတဲ့….
အာလာလာ… ဒီလူတွေတော့ ခနလေးတောင် အနားမပေးပါလား…ဖြစ်နိုင်ရင်သွားထိုင် ကတော့ဆိုရင်လည်း ထိုင်ကတော့ပါမယ်…. ၃ မိနစ်လေးလောက်တော့ ကောင်းကောင်းခံစားခွင့်ပေးရင် တော်တော် ကျေးဇူးတင်မှာဘဲ….
…. ဘုန်း… ၀ုန်း.. ခွမ်း..
…အီး.. ဟီး.. ဟီး…
ဟ…. ဘာလို့ဒီလောက်သောင်းကျန်းနေတာလဲ… ဒီမှာ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးတောင် နားအေးပါးအေးမနေရဘူး… ရည်းစားနဲ့ကွဲလို့ ရည်းစားမျက်နှာ မြင်ယောင်ပြီး အပီအပြင်ခံစားမလို့ဟာ….ခြင်ကကိုက်လိုက်၊ ဆူညံလိုက်နဲ့… တစက်မှကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်၊ အေးအေးဆေးဆေး မရှိဘူး… နည်းနည်းပါးပါးကိုယ်ချင်းစာပါဦး.. ဒီမှာ ငိုချင်လို့.. ဘယ်နားကမျက်ရည်ကျရမှန်းမသိအောင် မလုပ်ပါနဲ့… ခြင်လည်းခြင်လောက်.. လူလည်းလူလောက်.. တော်တော်အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်…
မတတ်နိုင်ဘူး… တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မှ ခံစားလို့မရတာ… ပေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ဘဲ ခံစားပြီး အားလုံးကို ပိတ်ပြောပြစ်လိုက်တယ်… ပြီးတော့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကျန်နေမဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ ခြင်ကို တွေ့ ပြီး ကျေနပ်သွားတယ်…
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 1:54 PM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 11:02 AM0comments
အနားမှာ လာကပ်ပြီး တတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့ သူကြောင့် လုံးဝမပတ်သက်တော့ဘူးလို့တင်းထားတဲ့ ဆည်းဆာရဲ့ စိတ်တွေ တဖြည်းဖြည်း အားနည်းလာတယ်…
နောက်ဆုံးတော့ သူ့ ရဲ့အနမ်းတွေနဲ့ ချစ်ခွန်းသီမှုတွေအောက် .. နာကျင်ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်မှာ ဆည်းဆာ ကမှန်းမသိ.. ကနေလျက်သားဖြစ်လာတယ်…
ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့မှာ လန်းလန်းဆန်းဆန်းဘဲ ဆည်းဆာ အိပ်ယာကနေ နိုးလာတယ်…
ချစ်သူဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ မျက်လုံးပွင့်ပွင့်ချင်း မြင်ချင်နေတာက ကိုယ့်ချစ်သူမျက်နှာလေးဘဲလေ… ဆည်းဆာ ရေမိုးချိုး၊ သန့်ရှင်းပြီးတာနဲ့ ချစ်သူအလာကို ဘယ်သူမှ မရိပ်မိအောင် တိတ်တိတ်ကလေး မျှော်နေမိတယ်…
အဲဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ ဖုန်းပြောသံကို အမှတ်မထင်ကြားလိုက်ရတယ်…
… ကြည့်စမ်း မိန်းမ… နင့်မှာရည်းစားရှိတာကို လျှိုထားတယ်… ရည်းစားဖြစ်တာကြာပြီလား…. နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ.. အော်.. ကိုဖြိုးလား.. ဟ.. သူကငါ့သူငယ်ချင်းဘဲလေ…
ဆည်းဆာ မျက်လုံးတွေ ပြာသွားတယ်.. တော်သေးတာပေါ့.. သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့အလုပ်နဲ့ သူတို့ရှုပ်နေကြလို့….
ဖုန်းပြောပြီးတော့ သူငယ်ချင်းက ဆည်းဆာကို… ဟဲ့.. ဆည်းဆာ.. ကိုဖြိုးကြီးက ရည်းစားရတာတောင် ငါတို့ကို မပြောပြဘူး.. နင်သိလား.. သူ့ ကောင်မလေးက ငါနဲ့သိတယ်.. အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာဘဲ…
ဆည်းဆာ ရင်ထဲမှာ ကျင်လာတယ်… ဖြစ်နိုင်ရင် သူငယ်ချင်းအရှေ့ကနေပြီးတော့ ထွက်ပြေးသွားလိုက်ချင်တယ်…..
…. ဆည်းဆာကို ဘာလို့လှည့်စားချင်ရတာလဲကိုဖြိုးရယ်…. ဘာအငြှိုးတွေနဲ့ နာကျင်စေချင်တာလဲ…
ကိုဖြိုးနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတာ.. သူငယ်ချင်းကိုလည်း မပြောရဲတဲ့ ဆည်းဆာကတော့ ဟန်မပျက်.. ဟုတ်လား.. လို့ဘဲ ပြန်မေးရတော့တာပေါ့… သူတို့တွေသာသိရင် ဆည်းဆာကို အရမ်းစိတ်ဆိုးကြမှာ ဆည်းဆာသိတယ်… ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကိုဖြိုးလို အရမ်းချစ်သူများတဲ့လူနဲ့ ဆည်းဆာကို သူတို့က အရင်ကတည်းကနဲ့ သဘောတူကြတာမဟုတ်ဘူး… အပေါင်းအသင်းအဖြစ်နဲ့သာ ပေါင်းနေပေမဲ့.. ကိုဖြိုး ဆည်းဆာကို စပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားကတည်းကနဲ့ သူတို့က အရင်ကန့်ကွက်ကြတာ….
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ကိုဖြိုးရောက်လာလို့ အားလုံးဘဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ထွေရာလေးပါး နောက်ကြတယ်.. အဲဒီအထဲမှာ ကိုဖြိုးရဲ့ ကောင်မလေးအကြောင်းတော့ လုံးဝမပါဘူး… ဆည်းဆာကသာ ဘာမှဝင်မပြောဘဲနဲ့ တည်တည်လေးဘဲ နေနေလိုက်တယ်….
သူငယ်ချင်းတွေ အပြင်ထွက်တဲ့လူထွက်.. အခန်းထဲမှာ အလုပ်ရှုပ်တဲ့လူ ရှုပ်နေချိန်မှာ သူက ဆည်းဆာနားကို လာပြီးတော့ အနမ်းတချက်နဲ့…
…ဆည်းဆာ.. ဘာဖြစ်နေတာလဲ.. ကိုယ့်ကိုဘာစိတ်ကောက်နေတာလဲ ချစ်သူလေးရဲ့…
..သွားပါ.. ကိုဖြိုးရဲ့ ချစ်သူ မြတ်မွန်ဆီကို သွားပါ.. ဆည်းဆာနားကို မလာပါနဲ့..
အော်.. ဆည်းဆာက သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို စိတ်ကောက်နေတာလား… ချစ်သူလေးကလည်းကွာ… ကိုယ်က အနားမှာရှိတဲ့.. ဟောဒီကအရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆည်းဆာလေး တယောက်တည်းကိုဘဲ စိတ်ထဲမှာ ရှိတာပါ.. သူက အဝေးကြီးမှာ.. နောက်တော့ သူ့ ဟာသူပြီးသွားလိမ့်မယ်…
ဆည်းဆာ.. သူ့ ကိုအကြောင်သားကြည့်နေမိတယ်.. ရည်းစားတယောက်ကို အဲဒီလောက် လွယ်လွယ်ထားတတ်တဲ့ သူ့ ကိုလည်း အံ့သြနေမိတယ်….
… ကိုဖြိုး ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ.. တဖက်မိန်းကလေးရဲ့ အချစ်ကို နည်းနည်းပါးပါး တန်ဖိုးထားပါဦး…
ဟာ.. ဆည်းဆာကလည်း သူက ကိုယ်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ.. သူဘာလုပ်နေလဲကိုယ်မသိရ.. မြင်လဲမမြင်ရ.. ဒါတွေထားလိုက်ပါကွာ.. အခု ဆည်းဆာနဲ့ကိုယ် အနားမှာ အတူရှိနေတုန်း.. စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ နေရအောင်ကွာ…
ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး…. ဆည်းဆာရင်ထဲမှာ ပြောမပြတတ်အောင် ၀မ်းနည်းလာတယ်…
ဆည်းဆာ တန်ဖိုးထား ချစ်တဲ့သူက အချစ်ကို လုံးဝမှ တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့သူ ဖြစ်နေပါပေါ့လား…
ဆည်းဆာစိတ်ထဲမှာ သှူ့ ကို လေးလေးနက်နက် ထားလို့ မဖြစ်တော့ဘူး… တချိန်မှာ သူ.. ဆည်းဆာကို ထားခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်.. ဆည်းဆာက သူ့ ကို လက်မခံနိုင်တော့လို့ ထားခဲ့ရင်ဖြစ် ဖြစ် သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားမှုတွေ ဆည်းဆာသယ်သွားလို့ မဖြစ်ဘူး..
တကယ်ဆို.. ဆည်းဆာက အချစ်ကို ကိုးကွယ်သူပါ… အားနည်းချက်ဆိုတာသိနေပေမဲ့… အလိုလိုနေရင်း အားငယ်တတ်၊ အားနာတတ်တော့ ဆည်းဆာ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရဘူး…
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဇာတ်လမ်း အဆုံးသတ်က ဘယ်လိုမှ မလှပနိုင်ဘူးဆိုတာ ဆည်းဆာ တထိုင်တည်းမှာဘဲ သိလိုက်တယ်…
သူပေးတဲ့အနမ်းတွေနဲ့ စကားလုံးလှလှလေးတွေလည်း ဆည်းဆာအတွက် မချိုတော့ဘူး.. အပွေ့ အဖက်တွေလည်း ရင်ခုန်စရာမကောင်းတော့ဘူး… ဘာမှထုတ်မမေးပေမဲ့.. သူ့ ကို သတိအနေအထားနဲ့ဘဲ ဆက်ဆံနေခဲ့တယ်… ဆည်းဆာ.. ဝေဒနာတပွေ့ တပိုက်ကြီး မပိုင်ဆိုင်ချင်ဘူး..
သူကတော့ ဆည်းဆာကို တွေ့ ရင်ကြင်နာတယ်.. မတွေ့ ရင်လည်း စာထဲမှာ အရမ်းလွမ်းတယ်၊ သတိရတယ်ဆိုတာတွေကို ပြောလေ့ရှိတယ်....
… တချိန်ကဆည်းဆာတိတ်တဆိတ်ချခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့.. အဲဒါက.. တဖက်လူက ဘာမှမသိလို့ သူ့ အချစ်ကို ယုံကြည်နေတာ.. သူ့ ကိုဆက်ပြီးတော့ လက်ခံနေတာ အပြစ်မရှိဘူး… ဆည်းဆာက အားလုံးကို သိနေရဲ့သားနဲ့ သူ့ ကိုဆက်ပြီး တော့ လက်ခံနေတယ်ဆိုရင် ဆည်းဆာလောက် မိုက်တဲ့လူရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး… အဲဒီတော့… ဆည်းဆာ သူနဲ့ဇာတ်လမ်းကို ရပ်မှဖြစ်တော့မယ်….
အခုတော့… ဆည်းဆာ သူနဲ့ အဝေးဆုံးမှာရှိနေတယ်… အချစ်ကိုတန်ဖိုးမထားသူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သူကတော့ အသစ်အသစ်လေးတွေနဲ့ပေါ့… ဆည်းဆာကလည်း သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကို မေ့ပြီး ဘ၀အတွက် အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချပြီး.. ပူပြင်းတောက်လောင်တဲ့ သူ့ အချစ်နဲ့ဝေးတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ကျေးလက်မှာ အပြစ်ကင်းတဲ့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ပျော်လျှက်….
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 11:38 AM 1 comments
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်လို့.. စက်ရုံတွေ မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ ထွက်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီအလုပ်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့.. အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ ထမင်းငတ်ကြတယ်.. အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်...
..အဲဒါမဟုတ်ဘူးလား.. ဟုတ်တယ်.. သူတို့ပြောတာမှန်တယ်။
အလုပ်ရုံတွေထွက်သွားတယ်... ပြည်သူတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ထောက်ခံရတာဟာ.. တကယ်တမ်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာလို့ အလုံးလိုက်အရင်းလိုက် အကျိုးဖြစ်နေတာ လူထုမဟုတ်ဘူး... စစ်အစိုးရကသာ တကယ့်အနှစ်တွေနဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေရနေတာ....
ကဲ... သူတို့ပြောတာရောမမှန်ဘူးလား.... သူတို့ပြောတာလည်း မှန်နေတာဘဲ..
အခုလို အငြင်းအခုံဖြစ်နေကြတဲ့နေရာမှာ.. ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ကြည့်ရင်တော့ မှန်နေကြတာပါဘဲ.. လူနှစ်ဦးရဲ့ အလယ်မှာ လက်ဝါးကိုဖြန့်ပြီး ထောင်ပြလို့ကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးကတော့ လက်ဖမိုး (ဒါမှမဟုတ်) လက်ဖ၀ါးကို တပြိုင်တည်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး....
အဲဒီတော့... နှစ်ဖက်လုံးကို ဆက်ပြီးတော့ ပေးငြင်းနေမယ်ဆိုရင် အငြင်းလွန်လို့ စိတ်ဆိုးပြီး ထသတ်လို့ နှစ်ဖက်စလုံးသာ သေသွားမယ်.... အဖြေတော့ သိသွားကြမှာမဟုတ်ဘူး...
အဲဒါက သူတို့နှစ်ဖက်ကြား မိမိရဲ့အမြင်... အဲ.. မိမိကိုယ်တိုင်ကရော အဖြေကို သိသလားဆိုတော့.... မသိပါဘူး.. ဟဲဟဲ...
ဒါပေမဲ့ မိမိရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးကိုတော့ နည်းနည်းလောက် အာချောင်ပါရစေ...
ဒီနေရာမှာ.. မိမိအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဘက်သုံးဘက်လို့မြင်ပါတယ်။ တဖက်က ပိတ်ဆို့မှုကို ထောက်ခံသူ.. နောက်တဖက်က မထောက်ခံသူနဲ့ နောက်ဆုံးတဖက်ကတော့ ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ လာပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေပါဘဲ...
ကျမကတော့ ဒီအကြောင်းအရာမှာ ထောက်ခံတဲ့လူအနေနဲ့ရော၊ မထောက်ခံတဲ့လူအနေနဲ့ရော.. ကိုယ်ချင်းစာပြီးတော့ ၀င်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ဘက်နဲ့သူတို့မှန်နေတာကို တွေ့ရလို့ နောက်ထပ်.. ကိုယ်ခံစားပြီး မ၀င်ကြည့်ရသေးတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေနေရာကို ၀င်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်...
ပြီးရင်.. စီးပွားရေးသမားတယောက်ရဲ့ ခံစားမှုလေးတွေ၊ စိတ်ကူးလေးတွေ လာပြန်ပြောပြမယ်..
...ရှူး.. တိတ်တိတ်လေး.. အခုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပြနဲ့ဦး...
အို့... ငါတကယ်ကိုဘဲ အရမ်းချမ်းသာသွားပါလား...
ကြည့်စမ်း.. ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ၊ တိုက်တွေ၊ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေ...
အခုလို ငါအခွင့်အရေးရတုန်းမှာ ငါလုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့ထားဦးမှ... ဒါမှ နောင်ဆိုရင် ငါ့မိသားစု အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေနိုင်မှာ...
လုပ်ငန်းအသစ်တိုးချဲ့ဖို့အတွက် အဓိကလိုအပ်တာက လုပ်ခနည်းနည်းဘဲ ပေးရတဲ့ အလုပ်သမားတွေရှိတဲ့နေရာ... လုပ်ကိုင်လို့နည်းနည်းဘောင်ကျယ်တဲ့နေရာနဲ့.. ဈေးကွက်ကောင်းကောင်းရဖို့စဉ်းစားရမယ်...
အော်.. အကြံရပြီ.. မြန်မာနိုင်ငံမှာဘဲ စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့... တော်တော်ကိုက်မယ်... (ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်းဆိုတော့ ပိုသိတယ်..) လုပ်အားခလည်း အများကြီးပေးစရာမလိုဘူး (ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင်..) အာမခံကြေးလဲ ပေးစရာမလိုဘူး.. အဓိက..က ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေနဲ့ အဆင်ပြေရင်ပြီးပြီ...
အချိန်တွေကလည်း ကုန်မြန်လာတယ်... နှစ်တွေတနှစ်ပြီးတနှစ် ကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတွေ့မှာ....
ဟေ့.. ချစ်သုဝေ... အခြေအနေတွေဘယ်လိုလဲ... စီးပွားရေးသမားတယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းရခဲ့ရဲ့လား..
အဲဒါနဲ့ မိမိလည်း... အတွေ့အကြုံကောင်းတော့ ရခဲ့ပါတယ်.. အခွင့်အရေးရတုန်း ငါက အကျိုးရှိအောင် အလုပ်ပိုလုပ်မိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ တခါမှ မြတ်တယ်မရှိဘူး...
ဟ... နင်ရဲ့ထုတ်ကုန်က ရောင်းမကောင်းလို့လား...
မဟုတ်ဘူးဟ.. ထုတ်ကုန်က ဘာမှမဟုတ်ဘူး.. အာဏာပိုင်တွေကို ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေတွေက နည်းတာမဟုတ်ဘူး... အဲဒါလည်း. .အေးအေးဆေးဆေးအလုပ်မလုပ်ရပါဘူး.. ငါ့အလုပ်က နည်းနည်း ၀င်ငွေကောင်းလာရင်.. လာပြီးတော့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်.. အခွန်ငွေတွေဆတိုးကောက်လိုက်.. မဟုတ်က၊ ဟုတ်က.. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေက တိုးလာလိုက်နဲ့ တော်တော် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်...
နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကလည်း တခါမှမငြိမ်တော့ နောက်ထပ်ရှိတာလေးတွေ မကုန်ခင် အမြန်ပြန်ထွက်ရတာဘဲ သူငယ်ချင်းတို့ရေ....
နင်က ပြင်ပကလူတွေ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ တောင်းဆိုနေလို့ ထွက်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်..
ဘယ်ကလာ.... ဘယ်လောက်ဘဲ ပိတ်ဆိုမှုတောင်းတောင်း... ငါအမြတ်ရရင် ငါဆက်လုပ်မှာပေါ့... မမြတ်ရင်တော့လား... ကန်တော့ပွဲနဲ့ လာခေါ်ပြီး လုပ်ခိုင်းရင်တောင် မလုပ်နိုင်ဘူး...
ကဲ... တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်.. ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းသာ စားကြည့်တော့...
နွားနဲ့နှိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး... တွေးခိုင်းတာပါ.... ဟီးဟီး....
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 2:08 PM0comments